| Iindaba ze-NAB | I-2020 I-NAB bonisa i-Media Partner kunye noMvelisi we-NAB BONISA LIVE. Iindaba zeeNjineli zoSasazo
Ikhaya » iindaba »
Iinqanawa ze-CEntrance "zeCerene dB"
I-headlines ze-CEntrance ezintsha zibonelela ngesandi sendalo, esibonakalayo esinebala elipheleleyo lokonwabela audiophile
Chicago, IL - Septemba 24, 2019 - UThintelo banzi ngomgca wayo wemveliso yeaudio ngokuqaliswa kwee-headset zabo zokuqala, ezibiziweyo ICerene dB. Isandi esitsha sentloko senziwe ngcono ukulungiselela ukubonelela ngereferensi ecacileyo yeengcali kunye nee audi audiles ezifanayo. Eyaziwayo ngomgca wabo ophumelelayo weemveliso zomsindo zobuqu, kubandakanya amabhaso okuphumelela amabhaso kunye nezixhobo zokurekhoda eziphathwayo, amatyala e-CEntrance kwihlabathi leefowuni sele elindelwe kakhulu.
entsha ICerene dB Iifowuni zentloko imele iminyaka yophando ekusebenzeni kweefowuni. I-CEntrance ithethe nabathengi abathembekileyo-iimvumi ezifanelekileyo kunye ne audi audiles ukuze baqonde eyona nto ibaluleke kakhulu kuyilo lwe-headphone. Umgangatho wesandi, intuthuzelo, ukuhlala wedwa, kunye nokufikeleleka kwexabiso njengezinto eziphambili. Uphethwe lolo phando, i-CEntrance ibeke phambili ukwenza ii-headphones ezizezona ziyakuhlala zide zifikelele “kumgangatho ofanelekileyo” moniker osetyenziswe yi-Stereophile Magazine ukuchaza iimveliso ze-CEntrance audiophile.
"Sifunde okuninzi malunga nokubekwa kweliso kwe studio kunye nokumamela audiophile kwaye lixesha lokudibanisa izixhobo zethu zokurekhoda nokudlala kunye neeseti zentloko ezihambelana nembeko ye-CEntrance yomgangatho kunye nokuxhomekeka," utshilo UMichael Goodman, I-CEO ye-CEntrance. "Sichithe ngaphezulu konyaka sitshintsha ii-headset zeCerene dB ukuba yinyani kwaye icacile, kuvumela abasebenzisi ukuba bazive zonke iinkcukacha, nokuba bamamele umsebenzi okanye bayonwabisa-okanye bobabini."
ICerene dB zii-headlines ezivalelekileyo ngasemva kunye noyilo olujikelezayo lokuzimeleka kwe-acoustic ephezulu. Iipads zesikhumba zento yokuqala eyenziweyo kunye nebhlukhwe yentloko edwelisiweyo ibonelela ngentuthuzelo ngexesha lokumamela ixesha elide. Iidrive ezinkulu, i-neodymium driver ezinikezela bass ezichanekileyo kunye ne-ext-end-high, ngokulinganayo enkulu ngokurekhoda nokudibanisa, okanye ukonwabela umculo owuthandayo. Uyilo olusongelayo olunemigangatho emibini, Ukujikeleza ikomityi ye-180-degree lubonelela ngeendlela zokugcina eziguquguqukayo kwaye lwenze i-headsets entsha ilungele ukuhamba.
I-cerene dB i-headphones yenzelwe uluhlu olubanzi lwabaphulaphuli kwindawo yokuqonda yabathengi ye-CEntrance: IAudiophiles, ukurekhoda nokutyelela abakhenkethi, iinjineli ze studio, abasasazi, kunye neepodcasters.
ICerene dB ii-headsets ezingabonakaliyo ezibonakalayo ziyafumaneka ngoku ngexabiso le- $ 179.99 USD.
Fumanisa okungakumbi malunga ICerene dB Ii -fowuni kwiwebhusayithi ye-CEntrance: isentrance.com/cerene/
Phantse iminyaka engamashumi amabini, iimpawu zehlabathi ezibonakalayo kwi-Pro Audio kunye ne-Electronics Electronics ziphendukela kwi-CEntrance kwi-teknoloji yomsindo we-digital. I-CEntrance ikwazi ukufumana amagunya okufumana ama-pedal-pedals, ama-interfaces okurekhoda, izikhulumi ezihlakaniphile kunye nee-DAC ezivela kwi-AZ uluhlu lweempawu eziphezulu, njenge-Alesis, Harman, McIntosh, ne-Zoom. Namhlanje, kunye nomnqweno wezandi ezigxilwe kwi-audio pro, i-CEntrance iyonwaba abathengi kwihlabathi jikelele kunye nomgca walo wobugcisa obunokuqala, owamkela umvuzo wokurekhoda umsindo kunye nokudlala. Abaculi abarekhodiweyo abadumileyo, abavelisi, abaqeqeshi bezwi, kunye nabaqulunqi bezandi baxhasa izixazululo ze-CEntrance zomsindo wazo ophezulu kunye nokuthembeka. Tyelela kuthi www.centrance.com
ICerene dB ™ luphawu lwentengiso lwe-CEntrance. Zonke iimpawu zentengiso ziyipropathi yabanini bazo. Onke amalungelo agciniwe.
UPaul de Benedictis
Izithuba ezandwendwe nguPaul de Benedictis (ndinibone nonke)
I-CEntrance "PortCaster" yenza lula ukufowunelwa kwiiPodcasts - Septemba 1, 2020
I-CEntrance yenqanawa yeRekhodi yeNgcali yeNgciza ngeeMics zeStereo - Novemba 5, 2019
UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli yoGcino 2019-09-24
Previous: Isandi se-Alchemy Post ukuxoxa ngoFoley we "Fosse / Verdon" yeFX kwi-NAB New York
next: Umgcini-zincwadi / Umfoto